ဒီနေရာလေးရဲ့ကောင်းသတင်းကို လူတော်တော်များများဆီက ကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။ သွားမယ်သွားမယ်လို့ အားခဲပြီး တခါမှမရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်ရောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ အရောက်နောက်ကျခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်မိတယ်။ ဒီနေရာလေးက မကျယ်ဝန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူကပေးတဲ့ ဗဟုသုတက အကန့်အသတ်မဲ့။ ဒီနေရာလေးက မခန်းနားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိသူတို့ပေးဆပ်ရာ။ ဒီနေရာလေးမှာ အသက်အရွယ်စုံ၊ လူတန်းစားမျိုးစုံတို့နဲ့ စည်ကားလို့နေတယ်။ ဒီနေရာလေးက အခြားမဟုတ်။ ဒီလိုနိုင်ငံရပ်ခြားမှာ တွေ့ရခဲတဲ့ မြန်မာစာကြည့်တိုက်လေးပါ။ မြန်မာစာပေကို တန်ဖိုးထားတဲ့၊ မြန်မာပြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ လူငယ်လေးတွေစုပေါင်း ထူထောင်ထားကြတာပါ။ စာရေးဆရာတော်တော်များများရဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေက လူငယ်လေးတွေရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှူသက်သေပင်။ လေးစားစရာ၊ကျေးဇူးတင်စရာ။ နံရံပေါ်မှာ စာရေးဆရာကြီးတချို့ရဲ့ ရှားပါးပုံတချို့။ ပြီးတော့ သူတို့စံထားတဲ့ သူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းပုံတချို့။ စာကြည့်တိုက်ကလေးအတွက် ကဗျာတပုဒ်။ စာကြည့်တိုက်ကလေးနာမည်က အားလုံးအတွက် အလင်းတစ။ စိတ်ကြိုက်စာအုပ်ရွေးချယ်ပြီးငှားတော့ ဖော်ရွေတဲ့အပြုံးလေးတွေနဲ့ လုပ်အားပေးနေသော လူငယ်လေးတွေ။ အလုပ်ချိန်များသော ဒီနိုင်ငံမှာ ရသမျှအချိန်လေးကို အနားမယူကြ။ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေမှာ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရဲရင့်သောစိတ်ဓါတ်လေးတွေ အထင်းသားတွေ့ရသည်။ တယောက်နဲ့တယောက်ညှိညှိနှိုင်းနှုိင်းတိုင်တိုင်ပင်ပင်စည်းစည်းလုံးလုံး။ အဲဒီစေတနာရနံ့လေးတွေထုံသင်းသော နေရာလေးမှပြန်လာတော့ နွေးထွေးသောအပြုံးလေးများက မျက်လုံးထဲကမထွက်။ ဒီနေရာလေးနဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေက ပနံရလိုက်ဖက်ညီလှတယ်။ သေချာတာတော့ ဒီနေရာလေးဆီ မကြာမကြာရောက်ဖြစ်တော့မှာပဲ။
Posted by တန်ခူး at 12:04 AM
Thanks for suchalovely description of "lan pya kyal" !! indeed..poem like style for our beloved library!
Giving us not only knowledge but also information, uniting all of us as one family..
it is the guiding stars..for burmese in sg!..
thanks for the founders, for the volunteers, for the supports from readers :D
လာဖတ်သွားတယ် ဗျို့ ... :D
ဓာတ်ပုံလေးတွေပါ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ပိုကောင်းမှာပဲဗျာ။ ဝေေ၀ဆာဆာလေးလဲ ဖြစ်သွားမယ် ထင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့နေရာတွေမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် ပေးပ့ါမလားဘဲနော်။
ကျနော်တို့မှာ ကိုယ်ပိုင်အက္ခရာ ကိုယ်ပိုင်စာပေ နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားရှိတာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ အဲသည်လိုမျိုးမရှိဘူး။
စာကြည့်တိုက်ကတော့ တကယ်ဘဲ အသိဉာဏ်ကိုဖွင့်ပေးတဲ့နေရာ။ ကျနော်တို့ခေတ်က လူငယ်တွေ တော်တော်များများ စာကြည့်တိုက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးခွင့်သာခဲ့ရင် ဒီနေ့ဒီအချိန် ကျနော်တို့ နိုင်ငံအနေအထားကလည်း တမျိုးတဖုံ ဖြစ်နေနိုင်တယ်။
စင်္ကာပူမှာ လမ်းပြကြယ်စာကြည့်တိုက်ပေါ်လာတာကတော့ တကယ်ဘဲ အကျိုးရှိလှပါတယ်။
ညီမလေးဆုဝေရေ...လူသာငယ်ပေမယ့်စိတ်ဓါတ်မြင့်မားရင့်ကျက်တဲ့ လမ်းပြကြယ်လေးတွေကို အရမ်းလေးစားမိပါတယ်။